अझै बिक्री भएन युनिभर्सलको आइपीओ, बाँकी ४ लाख कित्ता कसले किन्ला ?
काठमाण्डौ । युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमीटेडको आइपीओ अझै बिक्री हुन सकेको छैन । कम्पनीका अधिकारीहरुले विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी चाँडै रिटर्न दिने तीव्र प्रचारप्रसार गरे पनि पहिलो चरणमै आइपीओ बिक्री हुन सकेन । दोश्रो चरणमा बिक्री खुल्ला भएको केही दिन बितिसके पनि सबै कित्ता आइपीओ अझै बिक्री हुन नसकेको हो । कम्पनीको आइपीओमा हालसम्म १...
शिवमको आइपीओ: पहिलो दिन १४.२२% कित्ता बिक्री
काठमाण्डौ । शिवम सिमेन्ट्स लिमीटेडले प्रिमियम मूल्यमा निश्कासन गरेको आइपीओमा पहिलो दिन १८ करोडको हाराहारीमा आवेदन परेको छ । यो कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँमा निश्कासन गरेको आइपीओमा पहिलो दिन नै १८ करोडको हाराहारीमा आवेदन परेको हो । बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार ४ हजार ५८१ आवेदकबाट ५ लाख ८५...
शिवम्को आइपीओ: खुलेको डेढघण्टामै ६ करोड बढीको आवेदन !
काठमाण्डौ । शिवम सिमेन्टले निश्कासन गरेको आइपीओमा किनै उत्साहप्रद आवेदन परिरहेको छ । यो कम्पनीले सर्वसाधारण र आयोजना प्रभावितका लागि सोमबारदेखि आइपीओ निश्कासन गरेको हो । सर्वसाधारणका लागि निश्कासन गरिएको आइपीओ खरीदका लागि आवेदन खुलेको डेढ घण्टाभित्रै २ हजार भन्दा बढी आवेदन परेका बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले जनाएको छ...
फागुन १३ देखि पाँचथर पावरको आइपीओ, साधारण लगानी फिर्ता हुन ८.९४ वर्ष लाग्ने
काठमाण्डौ । पाँचथर पावर कम्पनीले आयोजना प्रभावितले समेत नकिनेको समेत जोडेर आगामी फागुन १३ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि १७ लाख ५० हजार २५० कित्ता सेयर निश्कासन गर्ने भएको छ । पाँचथर पावर कम्पनी लिमीटेडले पुस ३० गतेदेखि माघ २९ गतेसम्म आवेदन दिनसक्ने गरी आयोजना प्रभावितका लागि ९ लाख ६२ हजार ५०० कित्ता आइपीओ निश्कासन गरेको थियो । सोमध्ये १...
शिवम् सिमेन्ट्सको आइपीओ निश्कासन, कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य कस्तो छ ?
काठमाण्डौ । निकै चर्चामा रहेको शिवम सिमेन्ट्स लिमीटेडको आइपीओ आज(सोमबार)देखि निश्कासन भएको छ । यो कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणका लागि आइपीओ निश्कासन गरेको हो । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रतिसेयर ३०० रुपैयाँको दरले कुल ४१ लाख २० हजार कित्ता र आयोजना प्रभावितका लागि प्रतिसेयर २०० रुपैयाँको दरले ५ लाख ७९...
काठमाण्डौ । आयोजना प्रभावित(स्थानीय)बाट बहिस्कृत अर्को जलविद्युत आयोजनालाई समेत धितोपत्र बोर्डले आइपीओ निश्कासन अनुमति दिएको छ । माउण्टेन हाइड्रो नेपाल लिमीटेडलाई धितोपत्र बोर्डले १८ लाख १६ हजार ११० कित्ता आइपीओ निश्कासनको अनुमति दिएको हो । यो कम्पनीले गत असार २२ गतेदेखि आयोजना प्रभावित पाँचथरबासीका लागि १२ लाख ५० हजार कित्ता...
काठमाण्डौ । प्राथमिक बजारमा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुको सेयर खरीदका लागि अचाक्ली आवेदन पर्दै आएको छ । यही क्रममा अर्को माइक्रोफाइनान्स कम्पनीलाई समेत सर्वसाधारण र कर्मचारीका लागि आइपीओ निश्कासन अनुमति दिइएको छ । स्पर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडले २ लाख ६९ हजार ६३० कित्ता आइपीओ निश्कासनको अनुमति पाएको हो । कम्पनीलाई...
काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा अचानक उछाल आएको छ । यसले भारतको स्थानीय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । नेपालमा भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने भएकोले त्यसको प्रभाव यहाँ समेत पर्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार पाँचौ दिन शनिवार समेत बढेको �...
काठमाण्डौ । युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमीटेडको आइपीओ अन्ततः पहिलो चरणमा बिक्री हुन सकेन । कम्पनीका अधिकारीहरुले विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी चाँडै रिटर्न दिने तीव्र प्रचारप्रसार गरे पनि पहिलो चरणमै आइपीओ बिक्री हुन नसकेको हो । कम्पनीका अधिकारीहरुले तरलता अभावको समयमा यस्तो समस्या आएको बिजशालासँगको कुराकानीमा दाबी गरे पनि राम्रा...
काठमाण्डौ । कमजोर वित्तीय अवस्थाका जलविद्युत कम्पनीका आइपीओ सर्वसाधारणले धमाधम बहिस्कार गर्न थालेका छन् । युनिभर्सल पावरको आइपीओ आयोजना प्रभावितले निकै थोरै कित्ता मात्र खरीद गरी बाँकी रहेको कित्ता समेत जोडी सर्वसाधारणका लागि जारी गरिएको आइपीओ समेत पहिलो चरणमा नबिकिरहेको अवस्थामा पाँचथर पावरको आइपीओलाई समेत स्थानीयले बहिस्कार...
काठमाण्डौ । आयोजना प्रभावितबाट बहिस्कृत भई न्यून कित्ता मात्र बिक्री भएको युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमीटेडको आइपीओलाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताले समेत पहिलो चरणमा पत्याएनन् । कम्पनीका अधिकारीहरुले विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी चाँडै रिटर्न दिने भन्दै भ्रम सिर्जना गर्न खोजे पनि लगानीकर्ताहरुले त्यस्ता दाबीलाई पत्याइदिएनन् । जसले गर्दा...
सेबोनले शिवम् सिमेन्टको आइपीओको भाउ घटायो, अब प्रतिकित्ता रु. १०० कममा आउने
काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले शिवम् सिमेन्ट्सको आइपीओ मूल्य घटाएको छ । अब आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणले पहिला तोकिएको भन्दा १०० रुपैयाँ सस्तोमा यो कम्पनीको आइपीओ पाउनेछन् । यसअघि शिवम सिमेन्टले आयोजना प्रभावितका लागि १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २०० रुपैयाँ प्रिमियम तोकेर प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँको दरले आइपीओ निश्कासन गरेको थियो...
स्थानीयबाट बहिस्कृत अर्को हाइड्रोलाई आइपीओ अनुमति, ग्रेड फाइभको रेटिङ
काठमाण्डौ । युनियन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमीटेडले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले समेत नकिनेको सेयर समेत जोडेर सर्वसाधारणका लागि ३५ लाख ३४ हजार ३४० कित्ता आइपीओ निश्कासनको अनुमति पाएको छ। यो कम्पनीले गत साउन १४ गतेदेखि आयोजना प्रभावितका लागि ७ लाख ५० हजार कित्ता आइपीओ निश्कासन गरेको थियो । तर, ६ लाख २१ हजार ७९० कित्ता बिक्री भएको...
युनिभर्सलको आइपीओमा ५९% मात्र आवेदन, बिक्री हुन धौ धौ !
काठमाण्डौ । आयोजना प्रभावितबाट बहिस्कृत भई न्यून कित्ता मात्र बिक्री भएको युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमीटेडको आइपीओमा तेश्रो दिन पनि अपेक्षाकृत आवेदन परेन । सोमबार साँझ ५ः३० बजेसम्मको तथ्यांक अनुसार ५९ हजार आवेदकले ५५ करोडको हाराहारीमा आइपीओ खरीदका लागि आवेदन दिएका छन् । यो हिसाबले तेश्रो दिनसम्म कम्पनीले निश्कासन गरेकोमध्ये ५९...
युनिभर्सलको ३८% आइपीओ मात्र बिक्री, लगानीकर्ता सचेत !
काठमाण्डौ । आयोजना प्रभावितबाट बहिस्कृत भई न्यून कित्ता मात्र बिक्री भएको युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमीटेडको आइपीओमा दोश्रो दिन समेत उत्साहप्रद आवेदन परेन । दोश्रो दिन आइतबार साँझसम्म यो कम्पनीको आइपीओमा मागको तुलनामा ३८.१४ प्रतिशत मात्र आवेदन परेको हो । पहिलो दिन ११ प्रतिशतको हाराहारीमा आवेदन परेको थियो । बिक्री प्रबन्धक...